သတင်း - ရာထူးတက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
ထိုင်ခြင်းကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအသစ်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး လူအများအပြားက ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဟု လူအများက ယူဆကြသည်။ အလွန်အကျွံထိုင်ခြင်းသည် အဝလွန်ခြင်းနှင့် ဆီးချို၊ သွေးတိုးနှင့် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကဲ့သို့သော နာတာရှည်ရောဂါများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်။ ထိုင်ခြင်းသည် ခေတ်မီသောကဏ္ဍပေါင်းစုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဝ။ အလုပ်သွားရင်း လမ်းသွားရင်းလာရင်း တီဗီရှေ့မှာ ထိုင်တယ်။ သင့်ထိုင်ခုံ သို့မဟုတ် ဆိုဖာ၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှ စျေးဝယ်ခြင်းကိုပင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အစားအသောက် ညံ့ဖျင်းခြင်း နှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်းသည် ပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး—စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့ကို အလွန်အကျွံ ထိုင်ခြင်းမှ တိုးမြင့်လာနိုင်ကြောင်း ပြသထားသည်။
'Active workstation' သည် သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း ထိုင်နေရာမှ ပြောင်းနိုင်စေမည့် စားပွဲတစ်ခုအား ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ရပ်နေသည့် စားပွဲများ၊ စားပွဲခုံပြောင်းစက်များ သို့မဟုတ် ပြေးစက် စားပွဲများကို ergonomics နှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် အကောင်းဆုံးဟု ယူဆပါသည်။ အံဝင်ခွင်ကျ အသံနည်းသော ဖြေရှင်းနည်းများတွင် စားပွဲဝိုင်းများ၊ စက်ဘီးခုံများ နှင့် DIY အစီအစဥ် အမျိုးမျိုး ပါဝင်သည်။ ယခင်နှစ်များက ရုံးဝန်ထမ်းများအား ထိုင်ခုံတွင်သုံးသည့်နာရီအရေအတွက်ကို သိသိသာသာလျှော့ချခြင်းဖြင့် အထိုင်ရောဂါအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ရေရှည်တည်တံ့သောအဖြေကို ပေးသောကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။
တက်ကြွသောအလုပ်ရုံများသည် အဝလွန်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုမြင်ပုံနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတို့အပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။ တက်ကြွသောအလုပ်ရုံတစ်ခုသည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်၊ သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်ကဲ့သို့သော ကျန်းမာရေးအမှတ်အသားများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ အဆင့်များ၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ပျော်ရွှင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ British Journal of Sports Medicine မှ လမ်းညွှန်ချက်များသည် တက်ကြွသောအလုပ်ရုံများမှ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန် အလုပ်ချိန်အတွင်း ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ ရပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
အဝလွန်ခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လူထုကျန်းမာရေးအတွက် ထိပ်တန်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာန၏ အဆိုအရ အဝလွန်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖျားနာမှုများသည် အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်းတွင် တစ်နှစ်လျှင် ဆေးဖိုးဝါးခ ဘီလီယံရာနှင့်ချီ၍ ကုန်ကျနေပါသည်။5 ထို့အပြင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အဝလွန်ခြင်းအစီအစဉ်များသည် များပြားသော်လည်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရုံးများတွင် တက်ကြွသော အလုပ်ရုံများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်သည်။ အထိရောက်ဆုံး ဖြေရှင်းနည်းကတော့ နေ့တိုင်း အလွယ်တကူ သုံးနိုင်လို့ပါပဲ။
လေ့လာမှုများအရ ပြေးစက်စားပွဲများသည် နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေသောကြောင့် အဝလွန်ခြင်းအတွက် အရေးပါနိုင်သည်ဟု လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။၆ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်မီက လူတစ်ဦးချင်းစီတွင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး သွေးပေါင်ချိန်နှင့် ကိုလက်စထရောကဲ့သို့သော အခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အမှတ်အသားများကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
တစ်နာရီလျှင် ကယ်လိုရီ 100 ထပ်တိုးပါက တစ်နှစ်လျှင် 44 ပေါင်မှ 66 ပေါင်အထိ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေကာ စွမ်းအင်မျှတမှုရှိသည် (၎င်းမှာ သင်လောင်ကျွမ်းသည်ထက် ကယ်လိုရီပိုစားသုံးရမည်ဟု ဆိုလိုသည်)။ လေ့လာမှုများအရ ၎င်းသည် တစ်နေ့လျှင် ၂ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ ပြေးစက်ပေါ်တွင် အရှိန် ၁.၁ မိုင်နှုန်းသာ လမ်းလျှောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း လေ့လာမှုများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါက အဝလွန်ပြီး အဝလွန်တဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် သိသာထင်ရှားတဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခုပါ။
2. ခါးနာခြင်းကို လျှော့ချပါ။
ခါးနာခြင်းသည် အလုပ်လွတ်သွားခြင်းအတွက် အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခါးနာခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် မသန်စွမ်းမှု၏ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် ဟု American Chiropractic Association မှ သိရသည်။ ကိန်းဂဏန်းများအရ လူဦးရေ၏ 80% သည် ၎င်းတို့၏ ဘဝတစ်သက်တာတွင် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ခါးနာခြင်းကို ခံစားရမည်ဟု အမေရိကန် အလုပ်သမားအားလုံး၏ ထက်ဝက်ခန့်က နှစ်စဉ် ခါးနာခြင်းကို ခံစားနေကြရသည်။
Canadian လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစင်တာ၏ အဆိုအရ မကောင်းတဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြင့် နာရီပေါင်းများစွာ ထိုင်ခြင်းက သွေးစီးဆင်းမှုကို ဟန့်တားပြီး ခါးကျောရိုးကို ထပ်လောင်းဖိစီးစေတဲ့အတွက် ခါးနာတာကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။9 မတ်တပ်ရပ်ထားသော စားပွဲခုံဖြင့် ထိုင်ချိန်ကို ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ခေါ်ဆိုမှုဖြေကြားခြင်းကဲ့သို့သော အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း သွေးလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် သင်၏ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို မြှင့်တင်ပါ။
မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရှိ ကြွက်သားများနှင့် အရွတ်များကို အားကောင်းစေပြီး အရိုးသိပ်သည်းဆကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် သန်မာပြီး ကျန်းမာသော အရိုးများကို ရရှိစေပါသည်။
3. သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေခြင်း။
သွေးလည်ပတ်မှုဟာ ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်တွေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတွေကို ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ နှလုံးသည် သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်မှတဆင့် သွေးများကို စုပ်ယူပေးသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သွားလာကာ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အောက်ဆီဂျင်နှင့် အာဟာရများကို အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် သွေးလည်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေးပေါင်ချိန်နှင့် pH အဆင့်များကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်အူတိုင်အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။
လက်တွေ့အားဖြင့် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသော်လည်း လှုပ်ရှားပါက နိုးကြားမှုတိုးလာခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောသွေးပေါင်ချိန်နှင့် လက်နှင့်ခြေတို့တွင် နွေးထွေးမှုတို့ကို ခံစားရနိုင်သည် (အအေးလွန်ကဲခြင်းများသည် သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းသော လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်)။10 သတိပြုရန်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုအားနည်းခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆီးချိုရောဂါ သို့မဟုတ် Raynaud's ရောဂါကဲ့သို့ ပြင်းထန်သောရောဂါ၏ လက္ခဏာ။
4. Positive Mental Outlook
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမက စိတ်တွင်ပါ အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ အလုပ်တွင် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်းနှင့် ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်းတို့ကို ခံစားရသော အလုပ်သမားများသည် မတ်တပ်ရပ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများလာသောအခါတွင် နိုးကြားမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အထွေထွေကုန်ထုတ်စွမ်းအားများ တိုးလာကြောင်း သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
စစ်တမ်းများအရ ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် တစ်နေ့တာထိုင်ခြင်းကို မကြိုက်သည် သို့မဟုတ် မုန်းတီးကြောင်း ပြသသည်။ ဝဘ်နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ လှိုင်းစီးခြင်းအတွက် သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါး အပန်းဖြေနည်းဖြစ်သော်လည်း စစ်တမ်းကောက်ယူထားသည့် အလုပ်သမား ထက်ဝက်ကျော်သည် ရေချိုးခန်းသွားခြင်း၊ သောက်စရာ သို့မဟုတ် အစားအသောက်များရယူခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောခြင်းကဲ့သို့ တက်ကြွသော အားလပ်ချိန်များကို နှစ်သက်ကြသည်။
ထိုင်ခြင်းသည်လည်း စိတ်ပူပန်မှုနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို တိုးစေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်းနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကြား ဆက်စပ်မှုကိုပင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကိုယ်ဟန်အနေအထား ညံ့ဖျင်းပါက "screen apnea" ဟုခေါ်သည့် သတိပြုမိသော အခြေအနေသို့ အထောက်အကူ ပြုနိုင်သည်။ အသက်ရှုတိမ်ခြင်းဟုလည်းသိကြသော၊ screen apnea သည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား ဆက်တိုက် 'ရန်ပွဲ သို့မဟုတ် ပျံသန်းခြင်း' မုဒ်သို့ ပို့ပေးသည်၊၊ ၎င်းသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ဖိစီးမှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ဟန်အနေအထားသည် အပျော့စားမှ အလယ်အလတ် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေရန်၊ စွမ်းအင်အဆင့်ကို တိုးမြင့်စေကာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများသော အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ကြောက်ရွံ့မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် စိတ်ခံစားချက်နှင့် မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း ပြသထားသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အလုံးစုံ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အကြောင်းရင်းတစ်ခုအတွက် အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံးသော ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပျက်ကွက်ခြင်းကို လျှော့ချရန်၊ သုခချမ်းသာကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီပေးကြောင်း ပြသထားသည်။ 15 ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းသည် သင့်သွေးပေါင်ချိန်ကို မြင့်တက်စေကာ သင့်သွေးကြောများ၊ နှလုံးနှင့် ကျောက်ကပ်များကို ပျက်စီးစေသည့်အပြင် နာတာရှည်သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။
သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုခြင်းသည် တက်ကြွသော အလုပ်ရုံတစ်ခုအား အသုံးပြုခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ရပ်နေသော အလုပ်သမားများသည် စွမ်းအင်နှင့် စိတ်ကျေနပ်မှု တိုးလာခြင်း၊ စိတ်ခံစားချက် တိုးတက်လာခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးလာခြင်းတို့ကို အစီရင်ခံပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပြေးစက်စားပွဲခုံမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းက မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် အကျိုးပြုတဲ့ နှောင့်နှေးမှုဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြေးစက်ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ပြီးနောက် ဘာသာရပ်များ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်သည် အနည်းငယ် တိုးတက်ကြောင်း ပြသထားသည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု တိုးမြှင့်ခြင်းသည် Type II ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနှင့် ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာများကဲ့သို့သော အဝလွန်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော နာတာရှည်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးကြောင်း ကောင်းစွာ ခိုင်လုံသော အခိုင်အမာ တွေ့ရှိရပါသည်။ တက်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းသည် နှလုံးဖောက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အရိုးပွခြင်းနှင့် အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။
လေ့လာမှုများစွာအရ အထိုင်များချိန် လျော့နည်းခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းကြား ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း လေ့လာမှုများစွာက ဖော်ပြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်၊ တစ်နေ့လျှင် ၃ နာရီအောက်သာ ထိုင်ရသည့် ဘာသာရပ်များသည် ထိုင်နေကြသူများထက် နှစ်နှစ် ပိုရှည်သည်။
ထို့အပြင်၊ တက်ကြွသောအလုပ်ရုံများသည် ရုံးဝန်ထမ်းများကြားတွင် ဖျားနာသည့်ရက်များကို လျော့နည်းစေကြောင်း ကျန်းမာရေးသုတေသနပြုချက်များအရ အလုပ်တွင်တက်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းသည် သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု သက်သေပြခဲ့သည်။